Ungayifaka Kanjani Ukulandelela Komkhankaso We-Google Analytics kuHootsuite | Martech Zone
Ungayifaka Kanjani Ukulandelela Komkhankaso We-Google Analytics kuHootsuite
ULwesithathu, May 9, 2012 NgoLwesithathu, Agasti 22, 2018 Douglas Karr
Izolo simemezele lokho DK New Media wabizwa ngegama I-Hootsuite Isixazululo Partner. Sonke besisebenzisa i I-Hootsuite Pro akhawunti iminyaka embalwa futhi uthande izici eziqhubekayo nokuzivumelanisa nezimo kade kunikeza iqembu lethu. Futhi… kungcosana yezindleko zezinjini zokushicilela zenhlalo.
Besilokhu sicindezela wonke amaklayenti ethu ukuthi asebenzise ngokugcwele umkhondo wokulandela umkhondo lapho ethumela izixhumanisi zawo I-Hootsuite. Abantu abaningi bacabanga ukuthi badinga ukubhala ngesandla lowo mbuzo we-URL - kepha I-Hootsuite empeleni inikeza isikhombimsebenzisi esihle kakhulu sokufaka imininingwane edingekayo yokulandela umkhankaso.
I-querystring yomkhankaso yakhiwe ngamapharamitha ama-5:
Umthombo Womkhankaso (utm_source) - Ipharamitha edingekayo. Sebenzisa utm_source ukukhomba injini yokusesha, igama lezindaba, noma omunye umthombo. Isibonelo: utm_source = google
I-Campaign Medium (utm_medium) - Ipharamitha edingekayo. Sebenzisa utm_medium ukukhomba okufana ne-imeyili noma izindleko ngokuchofoza ngakunye. Isibonelo: utm_medium = cpc
Isikhathi Somkhankaso (utm_term) - ipharamitha ongayikhetha. Isetshenziselwa ukusesha okukhokhelwayo. Sebenzisa utm_term ukuqaphela amagama asemqoka alesi sikhangiso.
Isibonelo: utm_term = ukugijima + izicathulo
Okuqukethwe komkhankaso (utm_content) - ipharamitha ongayikhetha. Isetshenziselwa ukuhlolwa kwe-A / B nezikhangiso eziqonde kokuqukethwe. Sebenzisa utm_content ukwehlukanisa izikhangiso noma izixhumanisi ezikhomba ku-URL efanayo. Izibonelo: utm_content = logolink or utm_content = i-textlink
Igama Lomkhankaso (utm_campaign) - ipharamitha ongayikhetha. Isetshenziselwa ukuhlaziywa kwamagama angukhiye. Sebenzisa utm_campaign ukukhomba ukukhuthazwa komkhiqizo othile noma umkhankaso weqhinga. Isibonelo: utm_campaign = spring_sale
Nakhu ukusondela lapho sisethe khona i-URL okufanele sibe nayo Ukulandelelwa komkhankaso we-Google Analytics. Uma uthikha ibhokisi ongalikhetha, ungaba nalo njalo ukwengeza umkhondo wokulandela umkhondo kuwo wonke ama-URL. Lowo akuwona umqondo omubi… futhi ungakuthola kusiza samasayithi wangaphandle othumela kuwo ithrafikhi eningi yokudluliselwa kuwo.
Uma ufaka i-URL yakho endaweni yokuxhumanisa, uzobona igiya ongalichofoza ukuze wehlise izinkambu ezithuthukile ukwengeza umkhondo wokulandela umkhankaso. Okunye kokusetha kusivele kuyi-Google Analytics. Uma usebenzisa enye iwebhu analytics ipulatifomu, ungangeza kalula ukusetha kwakho lapha, futhi!
Sizokwabelana ngamathiphu amaningi namasu lapha wokuthi singakusebenzisa kanjani ngokugcwele I-Hootsuite Pro ngamasu akho wezokuxhumana wezinkampani. Ukudalula: Sizophinde sabelane ngezixhumanisi zokusebenzisana lapho sithumela lezi zihloko.
Tags: ukulandelela izibaloukulandelela umkhankasoI-google analyticsi-hootsuite
Idatha Enkulu Iletha Ukumaketha Izinombolo Ezinkulu
Umongo, Umbono nokwabelana ngobuwula
May 24, 2012 ku-7: 34 AM
Ngiyabonga ngale ndatshana enhle! Ngiyakujabulela kakhulu ukufunda ngalezi zeluleko!